फरकधार लियो नेकपा विवादले ! - Demo Khabar
शुक्रवार, श्रावण ३० २०७७
लामो समयदेखि अबरुद्ध सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको संवादको थालनी भएको छ । एकातिर स्थायी कमिटी बैठक सूचारु गर्न ओली सहमत भएका छन भो अर्कातिर भारतसँग सचिवस्तरीय वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा सहमत देखिए । र, भारतसँग वार्ताको तयारी पनि गरिँदैछ । अकस्मात आएको क्रियाशिलताले राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ दिशातर्फ जान खोजेको त होइन ? भन्ने आँकलन राजनीतिक बृत्तमा छ ।
कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले निरन्तर आफू पक्षका नेतासँग छलफल थालेपछि ओली पक्षले लचकता अपनाउँदै स्थायी कमिटी बैठक सूचारु गर्न सहमति जनाएका हुन । दाहाल नेपाल समूहले बुधबार र विहिबार लगातार आफू पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर छलफल थालेको खबर बालुवाटारमा पुगेपछि ओलीले विहिबारको संवादमा स्थायी कमिटी बैठक सुचारु गर्न सहमत भएको स्रोतको दावी छ ।
नौ दिनपछि उनीहरुबीच भएको संवादमा ओलीले केही लचकता अपनाएपछि संवाद सकारात्मक चरणमा प्रवेश गरेको छ । उनीहरुबीच महाधिवेशन चाँडो गर्ने र त्यसका लागि सबै तहमा एक चरण छलफल अघि बढाउने सहमति बनेको छ । अध्यक्ष दाहालले स्थगित स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने र केन्द्रीय कमिटी सदस्यले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन भन्दै आफ्नो अडानमा रहेपछि ओलीले संवाद रोकेका थिए ।
ओलीले दुवै पद नछाड्ने अडान राखेपछि दाहाल समूहले एक पद भएपनि छाड्न दबाब दिइरहेका छन । अहिलेसम्म एक पद छाडेमा कुरा मिल्छ भन्ने अडानबाट दाहाल पछि हटेका हुन कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ ।
बैठकमा ओलीले राखेको प्रस्तावबारे छलफल भएको स्रोतले जानकारी दियो । सो बैठकमा वालुवाटारले राखेको प्रस्ताव र अन्य विषयहरुबारे छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । विहिबार राती अबेरसम्म भएको छलफलमा शुक्रबार दुई अध्यक्षबीच हुने संवादमा राख्ने प्रस्तावबारे पनि छलफल भएको स्रोतको दावी छ ।
शुक्रवार, श्रावण ३० २०७७०९:५७:२०